Habka magangalyada – Asylum – JRS Romania
Waxaad gudbisay codsi magangalyo mana laguu tixgelin doono magangalyo-doon Roomaaniya. Nidaamka magangalyada wuxuu ka koobnaan doonaa dhowr tillaabo, oo lagu faahfaahiyay qeybtaan.
Maxaa dhacaya kadib markaan dhiibto codsi magangalyo?
Codsigaaga magangalyada waxaa baaraya kormeerka guud ee laanta socdaalka (GII), Xarunta Gobolka ee laguu qoondeeyay (oo si rasmi ah loogu yeerayo Xarunta Xarunta Degenaanshaha iyo Nidaamyada Magangalyo-doonka). Waxaad maqli kartaa dad kale oo tixraacaya Kormeerka Guud ee Socdaalka “IGI” ama “Xafiiska Socdaalka”. Waxay kuxirantahay xaaladaada, habab kala duwan ayaa laga yaabaa in lagu dabaqo. Waxaad ka heli doontaa tafaasiisha ku saabsan nidaamyadan qaybaha kale.
Yaa iga caawin kara inta lagu gudo jiro howsha magangalyada?
Waxaad xaq u leedahay in lagu caawiyo oo lagula taliyo si bilaash ah hay’ad aan dawli ahayn (NGO, ama ONG ee Roomaania). Waxaad la xiriiri kartaa UNHCR waqti kasta. Waxaa kale oo kaa caawin kara garyaqaan adiga naftaada ku siisay.
Fadlan weydiiso talo iyo macluumaad sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah ka dib dalabkaaga magangalyo, si aad u fahanto waqtiyada kama dambeysta ah iyo habraaca ku habboon kiiskaaga. Guji HALKAN si aad u hesho macluumaadka xiriirka ee ururada kaa caawin kara.
Hawsha ma lacag baa?
Nidaamka magangalyadoon waa bilaash. Lagaagama baahnid inaad bixiso wax canshuur maamul ah ama ajuuro ah waqti kasta si dalabkaaga magangalyo looga baaraandego.
Ma ka tagi karaa nidaamka haddii aan beddelo maskaxdayda?
Waad ka noqon kartaa nidaamkaaga magangalyada waqti kasta, hadaad rabto inaad sidaa sameyso. Ururada bixiya la-talin sharci ayaa sharxi kara waxa ka dhalan kara falkan.
Ka aqri faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tallaabooyinka nidaamka magangalyada ee bogagga soo socda.